ChromeOS နှင့် Android ကို ၂၀၁၆ တွင်ပေါင်းစည်းမည် Androidsis
မိုrum်းတိမ်များနှင့် desktop အတွက် ChromeOS နှင့် Mountain View မှယောက်ျားလေးများ၏ operating system အကြား Android အတွက် operating system အကြားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက်နေ့ရက်တစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ဟာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိပြီး ၀ န်ဆောင်မှုတွေများစွာရှိပါတယ်။
ထိုယုတ္တိမတန်သောအရာများအနက်မှတစ်ခုမှာ Android တွင်အောက်ရှိကွန်ပျူတာအသေးစားများကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များအတွက်ထုတ်လွှင့်ရန် operating system တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည့်ဈေးကွက်တွင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အသုံးပြုသူကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးကဏ္ in ရှိကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံးပရိသတ်များမှဝေဖန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နာမည်ကျော်အမေရိကန်သတင်းစာအရ The Wall Street ဂျာနယ်ကဖော်ပြသည်မှာ - Google က Android နဲ့ ChromeOS ကိုပေါင်းစည်းဖို့စီစဉ်နေတယ် ထို့အပြင်၊ စုစည်းထားသောလည်ပတ်မှုစနစ်သစ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သတိပြုပါ၊ ဂူဂဲလ်သည် operating system အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း Mountain View မှယောက်ျားများသည် ChromeOS ကို Android တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
ChromeOS နှင့် Android၊ Operating System တစ်ခုတည်း၌လိုချင်သောပေါင်းစည်းမှု
မီဒီယာများအရဂူးဂဲလ်သည်ဤပေါင်းစည်းမှုကိုနှစ်နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂ ဝ ၁၆ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပေါင်းစည်းမှုကိုပြသရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၊ နာမည်ကျော် Google I / O.
သောကြောင့်, Android သည် ChromeOS ကိုစုပ်ယူသည်ကျွန်တော်တို့ကို Contiuum ဒါမှမဟုတ်aတွေ့လိမ့်မယ် Android အတွက် Ubuntu အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်လည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဗားရှင်းအတွက်မကြာမီလာမယ့်။ ဆိုလိုသည်မှာ Android စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်လာမည့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာဖြစ်လာနိုင်သည် နှင့် မိုဘိုင်းကိုမော်နီတာနှင့် / သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်သို့သာဆက်သွယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဒီဖန်သားပြင်ကို ChromeCast သို့မဟုတ် AndroidTV သုံးပြီးမော်နီတာတစ်ခုသို့ပို့နိူင်ပါတယ် Android ၏ Desktop Version ကိုအသုံးပြုပါ နှင့်အဘို့အဒီဇိုင်း applications များနှင့်အတူ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ယခုပြောင်းလဲမှုအသစ်သည် Google ၏လက်ရှိလက်တော့ပ်များဖြစ်သော Chromebook များ၊ သူတို့၏အမည်များကို ပြောင်းလဲ၍ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ Chromebooks များသည် US တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Google သည် ၄ ​​င်း၏ PC များကို update မလုပ်ပဲဘေးဖယ်ချန်ထားလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါက Chromebooks တွင် update update ပေါ်လစီသည် (၅) နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက Chrome နှင့် Android လမ်းညွှန်ချက်အပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက်လာမည့်နှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်များသောနှစ်ရှိနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့သင်, ဂူးဂဲလ် operating system နှစ်ခုအကြားဒီပေါင်းစည်းမှုကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ChromeOS နှင့် Android ကိုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်